Matatu Mamodheru Ekushambadzira Indasitiri Yekushambadza: CPA, PPC, uye CPM | Martech Zone
Kana iwe uchida kubudirira muindasitiri inokwikwidza zvakanyanya sekufamba, unofanirwa kusarudza nzira yekushambadzira inofambirana nezvinangwa zvebhizinesi rako uye zvekutanga. Neraki, kune akawanda mazano ekuti ungasimudzira sei brand yako online. Isu takasarudza kuenzanisa iyo inonyanya kufarirwa kwavari uye kuongorora zvayakanakira nezvayakaipira.
Kuti uve akatendeseka, hazvibviri kusarudza muenzaniso mumwe chete wakanakisisa kwose kwose uye nguva dzose. Mhando dzakakura dzinoshandisa mhando dzakawanda, kana kunyange dzose panguva imwe chete, zvichienderana nemamiriro ezvinhu.
Pay-per-click (PPC) kushambadza ndeimwe yenzira dzinonyanya kufarirwa dzekushambadzira. Inoshanda zviri nyore: mabhizinesi anotenga ads mukutsinhana nekudzvanya. Kutenga aya ads, makambani anowanzo shandisa mapuratifomu seGoogle Ads uye kushambadzira kwemamiriro ezvinhu.
PPC inofarirwa nemhando nekuti iri nyore uye iri nyore kubata. Zvichienderana nezvido zvako, unogona kuona panogara vateereri vako, uchiwedzera chero maitiro aunoda. Uyezve, mavhoriyamu emigwagwa haana muganho (iyo chete inogumira ndiyo bhajeti yako).
Chiitiko chakajairika muPPC kubhidhaidzwa kwemhando, kana mabhizinesi achikwidza maererano nemhando yemunhu wechitatu kuti avarove nekukwezva vatengi vavo. Kazhinji makambani anomanikidzwa kuita izvi nekuti vakwikwidzi vanotenga kushambadzira zvichienderana nezvikumbiro zvevakwikwidzi zvemhando. Semuenzaniso, paunotsvaga Booking.com muGoogle ichave yekutanga muchikamu chemahara asi ad block ine Hotels.com nemamwe mabhureki anoenda pekutanga. Vateereri vanozoenda kune uyo anotenga PPC kushambadzira; saka, Booking.com inoda kubhadhara kunyangwe iri mutungamiri wekutsvaga kwemahara. Kana iyo kambani yauri kutsvaga isingaoneke muchikamu chekushambadzira, inogona kurasikirwa nevatengi masikati machena. Nokudaro, kushambadza kwakadaro kwapararira kwose kwose.
Nekudaro, iyo PPC modhi ine dambudziko rakakura: shanduko haina kuvimbiswa. Makambani anogona kuongorora mibairo yemushandirapamwe kuitira kuti vasiye izvo zvisingashande. Zvinogonekawo kuti kambani ishandise mari yakawanda kupfuura yairi kuwana. Ndiyo njodzi yakakosha kutariswa nguva dzese. Zvekudzikisa, ini ndinokurudzira kuve nechokwadi chekuti mishandirapamwe yako iri kusvika kune yako chinangwa chevateereri. Ramba uine pfungwa dzakavhurika uye gara uchichinjika.
Mutengo-Per-Maira (CPM) Muenzaniso
Mutengo-Per-Mile ndeimwe yemhando dzakakurumbira kune avo vanoda kuwana kufukidzwa. Makambani anobhadhara pachuru chemaonero kana maonerwo echishambadzo. Inowanzo shandiswa mukushambadzira kwakananga, senge kana chinobuda chichitaura mhando yako mune zvayo kana kumwewo.
CPM inoshanda zvakanyanya mukuvaka ruzivo rwemhando. Makambani anogona kuyera kukanganisa vachishandisa zvakasiyana-siyana zviratidzo. Semuenzaniso, kuti iwedzere kucherechedzwa kwemhando, kambani yaizoongorora huwandu hwenguva vanhu vachitsvaga mhando, nhamba yekutengesa, nezvimwe.
CPM inowanikwa kwese kwese mukati kushambadzira kushambadzira, iyo ichiri munda mutsva. Mumakore achangopfuura, kwave nekuwedzera kwekuwedzera kwevapesvedzera muindasitiri.
Saizi yemusika wepasi rose yekushambadzira yakakosheswa USD 7.68 bhiriyoni muna 2020. Inotarisirwa kukura pamwero wepagore wekukura (CAGR) we30.3% kubva 2021 kusvika 2028.
Nekudaro, CPM zvakare ine zvimwe zvinokanganisa. Semuenzaniso, mamwe makambani anoramba zano iri mukutanga kwebhizinesi ravo nekuti zvinonetsa kuyera kukanganisa kwezviziviso izvi.
Mutengo-Pa-Chiito (CPA) Muenzaniso
CPA ndiyo yakanakisa modhi yekukwezva traffic - mabhizinesi anobhadhara chete kutengesa kana zvimwe zviito. Izvo zvakaoma, sezvo zvisingabviri kutanga kambani yekushambadzira mumaawa maviri, sePPC, asi mhedzisiro yacho inovimbika zvakanyanya. Kana ukaiwana pakutanga chaipo, mibairo yacho inoyerika mumativi ese. Izvi zvinokutendera kuti usvike kune vateereri vako uye kukupa huwandu hwe data nezve mashandiro ako emushandirapamwe.
Ndinoziva zvandiri kutaura nezvazvo: iyo yakabatana yekushambadzira network iyo kambani yangu - Travelpayouts - inopa inoshanda pamuenzaniso weCPA. Makambani maviri ekufambisa uye mablogiki ekufambisa vanofarira kubatana kwakanaka sezvo makambani anobhadhara chete chiitiko, panguva imwe chete achiwana kufukidzwa uye zvinoonekwa, uye varidzi vemigwagwa vanofarira kwazvo kushambadzira zvigadzirwa zvinoenderana kana masevhisi kune vateereri vavo, sezvavanowana makomisheni epamusoro. kana vatengi vakatenga matikiti kana kubhuka hotera, kushanya kana imwe sevhisi yekufambisa. The affiliate marketing in general - uye Travelpayouts kunyanya - inoshandiswa nemakambani makuru ekufambisa akadai Booking.com, Getyourguide, TripAdvisor uye zviuru zvemamwe makambani ekufambisa.
Kunyangwe CPA ingaite seyakanakisa ad zano, ini ndinokurudzira kufunga zvakanyanya. Kana iwe uchitarisira kuita chikamu chakakura chevateereri vako vavanovavarira, iyi haigone kuve yako yega zano. Kana iwe uchiibatanidza mubhizinesi rako zano, zvakadaro, iwe unosvika kune yakakura vateereri zvachose nekuti iwe unosanganisa vateereri vevamwe vako. Hazvigoneki kuti kushambadzira kwemamiriro ezvinhu kuite izvi.
Sechinyorwa chekupedzisira, heino zano: zvakakosha kuyeuka kuti hapana kana imwe yemazano akanyorwa ndiyo yekupedzisira mhinduro. Pane zvipingamupinyi kune imwe neimwe yadzo, saka ita shuwa kuti iwe unowana iyo chaiyo musanganiswa wemazano zvichienderana nebhajeti rako uye zvinangwa.
Tags: mutengo pachiitomutengo pairamutengo pachurucpacpmkushambadzira kushambadzirakubhadhara pakukandappcevanhu vezvenhau
WordPress: Kushandisa jQuery Kuvhura Hwindo reLiveChat Nekudzvanya Link kana Bhatani Uchishandisa Elementor.